२०१४—येशूको मृत्युको सम्झना गर्ने दिन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | भगवान्‌ले तपाईंको लागि के गर्नुभएको छ?
तपाईंले छुटाउन नहुने दिन
आफू मारिनुअघिको रात येशूले आफ्ना वफादार चेलाहरूलाई एउटा उत्सव मनाउने आज्ञा दिनुभयो। तिनीहरूले त्यो उत्सव येशू ख्रीष्टले चढाउनुभएको बलिदानको सम्झना गर्न मनाउनुपर्थ्यो। त्यस दिनलाई अन्तिम रात्रिभोज वा प्रभुको साँझको भोज भनिन्छ। आफ्ना चेलाहरूसित त्यो उत्सव मनाउँदा येशूले अखमिरा रोटी र रातो दाखमद्य प्रयोग गर्नुभएको थियो। अनि तिनीहरूलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो: “मेरो सम्झनामा यो गर्नेगर।”—लूका २२:१९.
त्यसैले आज पनि हरेक वर्ष विश्वभरिका यहोवाका साक्षीहरू येशू ख्रीष्टको मृत्युको सम्झना गर्न विभिन्न ठाउँमा भेला हुन्छन्‌। यसपालि चाहिं सन्‌ २०१४, अप्रिल १४, सोमबारको सूर्यास्तपछि त्यो उत्सव मनाइनेछ।
तपाईंलाई पनि त्यो उत्सवमा उपस्थित हुन हामी हार्दिक निमन्त्रणा दिन चाहन्छौं। येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन किन बलिदान दिनुभयो भन्ने विषयमा तपाईंले त्यस दिन अझै राम्रोसित बुझ्नुहुनेछ। त्यस दिन उपस्थित हुन तपाईंले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन। चन्दा पनि उठाइनेछैन। तपाईंले यो पत्रिका जुन व्यक्तिको हातबाट लिनुभएको हो, तिनले नै तपाईंलाई यो उत्सव स्थानीय तवरमा कहाँ मनाइँदैछ भनेर बताउन सक्छन्‌। अन्यथा हाम्रो वेब साइट jw.org मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया आवश्यक जानकारी टिप्नुहोस्। आशा छ, तपाईंले यो दिन छुटाउनुहुनेछैन।
येसुको मृत्युको स्मरणार्थ
हरेक वर्ष लाखौँ मानिसहरू येसुको मृत्युको वार्षिकीमा उपस्थित हुन्छन्‌। यस महत्त्वपूर्ण उत्सवले तपाईँको लागि कस्तो अर्थ राख्छ, थाह पाउनुहोस्‌।